पत्नी विछोडको पीर भुलाउन
भनिन्छ, हरेक चोटले त्योभन्दा ठूलो अवसर बोकेर ल्याएको हुन्छ । इकु अर्थात् सुलेमान शंकरले श्रीमती जया केसीबाट पाएको चोटलाई बिर्सन आठ सडक बालबालिकालाई ‘एडप्ट’ गरेका छन् । इकुले भूकम्प प्रभावित जिल्ला सिन्धुपाल्चोक, गोरखा र नुवाकोटका बच्चालाई जोरपाटीमा आश्रय दिइरहेका छन् । साढे दुईदेखि १३ वर्ष उमेरका बालबालिकाको अभिभावक बनेका सुलेमानले गत वर्ष मात्र पत्नी जयासँग डिभोर्स गरेका हुन् । अहिले एकल जीवन बाँचिरहेका छन्… विस्तृत समाचार
आफ्नालागि करोडांै पर्ने विलासी सरसामान खरिद गरेका चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष राजकुमार राईको अभद्र व्यवहारका कारण वरिष्ठ गीतकार यादव खरेल राजीनामा ठोकेर हिँड्न विवश भएका छन् । खरेल चलचित्र विकास बोर्ड मातहतको राष्ट्रिय चलचित्र नीति कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिमा संयोजक थिए । उनले शेरधन राई सञ्चारमन्त्री हुँदा १९ साउनको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएका छन् । खरेल बस्न कुर्सी र कोठासमेत नपाएसँगै राजीनामा दिएर… विस्तृत समाचार
अन्ततः राजकुमार राईले खाएको ६ लाख रुपैयाँ तिरिदिएबापत आकाश अधिकारी चलचित्र निर्माता संघको अध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन् । ३१ लाख रकम हिनामिना भएमध्ये ६ लाख दाखिला गरेपछि हालै सम्पन्न निर्माता संघको साधारणसभाले आकाशलाई निर्विरोध अध्यक्ष चयन गरेको हो । उपाध्यक्षमा गोविन्द शाही, माधव वाग्ले, महासचिवमा रोज राना, सचिव छवि ओझा, कोषाध्यक्ष सुशील पोखरेलसहित निर्विरोध चयन भएका हुन् । नवल खड्काले दायर गरेको मुद्दामा हाल साधारणसभा… विस्तृत समाचार
टिकट पाएर पनि यात्रा विकट
अति जात्रा देखाउन यी सोमले ! ३१ लाख गोलमाल पारेका राजकुमार राईकै कारण निर्माता संघमा भाँडभैलो मच्चिएको छ । आफूले हिनामिना गरेको रकममध्ये ६ लाख रकम आकाश अधिकारीलाई तिर्न लगाएर जात्रा मच्चाएका राईकै कारण २ पुसमा हुने भनिएको निर्माता संघको साधारणसभासमेत रोकिएको छ । एकातिर उनकै कारण साधारणसभा रोकिरहँदा शुक्रबार दुबईमा सम्पन्न नेफ्टा अवार्डमा राजकुमार राईको नाममा भिसा र टिकटसमेत इस्यु भइसकेर पनि त्यता नगएको… विस्तृत समाचार
को कता पुग्यो कलाकार !
चैते कलाकार कहिले कुन दलको मादल बन्छन्, कहिले कुन दलको । शेरधन राई सञ्चारमन्त्री हुँदा ‘खाँटी एमाले हुँ’ भन्दै सरिता लामिछानेले युवासंघका अध्यक्ष राजीव पहारी, गोविन्द थापाहरूलाई गुमराहमा पारिन् । उनी सो समय एमाले हुँ भन्दै चलचित्र विकास बोर्डको बोर्ड सदस्य बन्न लागिपरेकी थिइन् । सदस्य नपाएपछि आक्रोशित सरिता राजकुमार राईलाई अगाडि लगाएर बूढानीलकण्ठस्थित कांग्रेस सभापति देउवानिवास धाउन थालिन् । गत बुधबार उनीसहित कृष्ण मल्ल,… विस्तृत समाचार
‘गुन’ तिर्ने अचम्म अचम्मका तरिका अचेल साहित्यवृत्तमा देखिन थालेका छन् । हालै धरानमा सम्पन्न कार्यक्रममा ‘पालाको पैंचो’ यारहरूलाई मालामाल बनाइदिएपछि हेमन यात्री विवादमा तानिएका छन् । त्यहाँको विमल गुरुङ स्मृति पुस्तकालयले आयोजना गरेको राष्ट्रिय कविता महोत्सवमा हेमनले आफूनिकट ‘यार’ को हातमा सेटिङ मिलाएर पुरस्कार थमाइदिएका हुन् । विमल सिंगापुरे लाहुरे पूर्णबहादुर गुरुङका पुत्र हुन् । रमेश केसी, टंक घिमिरे, नवीन सुब्बाजस्ता प्रगतिशील कविको संगतमा परी… विस्तृत समाचार